ဘုရားသခင့်နိုင်ငံတော် (အပိုင်း ၂) - Worldwide Church of God Switzerland
မီဒီယာ > မဂ္ဂဇင်းကိုဆက်ခံ > မဂ္ဂဇင်းကိုဆက်ခံ 2014-03 > ဘုရားသခင်၏နိုင်ငံတော်အပိုင်း (1)
ဘုရားသခင့်နိုင်ငံတော်။ အပိုင်း ၁
ဘုရားသခင့်နိုင်ငံတော်သည်ခရစ်ယာန်သွန်သင်ခြင်းများကိုအမြဲတမ်းအဓိကထားပြီးမှန်ကန်စွာသွန်သင်ခဲ့သည်။ အထူးသဖြင့် ၂၀ ရာစု၌ဤကိစ္စနှင့် ပတ်သက်၍ အငြင်းပွားမှုတစ်ခုဖြစ်ပွားခဲ့သည်။ သမ္မာကျမ်းစာပါအကြောင်းအရာများ၏အရွယ်အစားနှင့်ရှုပ်ထွေးမှုနှင့်ဤခေါင်းစဉ်နှင့်ထပ်တူကျနေသောများစွာသောဘာသာရေးအကြောင်းအရာများကြောင့်သဘောတူညီချက်ရရှိရန်ခက်ခဲသည်။ ပညာရှင်များနှင့်ဓမ္မဆရာများအားလမ်းပြပေးသောကွဲပြားခြားနားသောကောက်ချက်များချရန်ဝိညာဉ်ရေးစိတ်ထားကွဲပြားမှုများစွာရှိသည်။
ဒီအပိုင်းသုံးပိုင်းမှာဘုရားသခင့်နိုင်ငံတော်နဲ့ပတ်သက်တဲ့အဓိကမေးခွန်းတွေကိုကျွန်မတို့ရဲ့ယုံကြည်ခြင်းခိုင်ခံ့အောင်လုပ်မှာဖြစ်တယ်။ ထိုသို့ပြုရာတွင်ကျွန်ုပ်သည် Grace Communion International တွင်သမ္မာကျမ်းစာပါအခြေခံယုံကြည်ခြင်းကိုတူညီသောသမိုင်းကြောင်းအရမှတ်တမ်းတင်ထားသည့်သမားရိုးကျခရစ်ယာန်ယုံကြည်ခြင်းကိုကိုယ်စားပြုသောအသိပညာအဆင့်နှင့်အခြားသူများ၏ရှုထောင့်အပေါ်ကျရောက်လိမ့်မည်။ ယေရှုခရစ်အပေါ်တစ် ဦး အာရုံနှင့်အတူဒီဇိုင်းရေးဆွဲဖြစ်လာသည်။ ခမည်းတော်၊ သားတော်၊ သန့်ရှင်းသော ၀ ိညာဉ်တော်ကိုကိုးကွယ်ခြင်း၌ကျွန်ုပ်တို့ကိုလမ်းပြသောသူသည်ဘုရားသခင်ဖြစ်သည်။ လူ့ဇာတိနှင့်သုံးပါးပေါင်းတစ်ဆူကိုအဓိကထားသည့်ဤယုံကြည်ချက်သည်ဘုရားသခင့်နိုင်ငံတော်နှင့် ပတ်သက်၍ ကျွန်ုပ်တို့အားသက်ဆိုင်သည့်မေးခွန်းတိုင်းကိုယုံကြည်စိတ်ချနိုင်သော်လည်းတိုက်ရိုက်ဖြေဆိုနိုင်မည်မဟုတ်ပါ။ သို့သော်၎င်းသည်ခိုင်မာသောအုတ်မြစ်နှင့်ယုံကြည်စိတ်ချရသောလမ်းညွှန်ချက်များကိုသမ္မာကျမ်းစာနှင့်အညီနားလည်စေရန်အထောက်အကူပြုလိမ့်မည်။
In den vergangenen 100 Jahren hat es im Hinblick auf zentrale Glaubensfragen zunehmende Übereinkunft unter jenen Bibelexegeten gegeben, die dieselbe grundlegende, theologische Gesinnung verbindet, die auch die unsrige ist. Bei ihr geht es um die Wahrhaftigkeit und Verlässlichkeit der biblischen Offenbarung, einen tragfähigen Ansatz zur Bibelauslegung sowie die Grundlagen christlichen Verständnisses (die Lehre) bezüglich solcher Fragen, wie der Göttlichkeit Christi, der Trinität Gottes, des zentralen Stellenwerts des Gnadenwerks Gottes, wie es in Christus kraft des Heiligen Geistes erfüllt ist, und des Erlösungswerks Gottes im Rahmen der Geschichte, auf dass es mit seiner von Gott vorgegebenen Zielsetzung, dem Endzweck, vollendet werde.
Wenn wir die Lehrmeinungen vieler Wissenschaftler fruchtbringend heranziehen könnten, scheinen zwei Ratgeber besonders hilfreich zu sein, um die zahllosen biblischen Zeugnisse hinsichtlich des Reiches Gottes zu einem (kohärenten) zusammenhängenden Ganzen zufügen: George Ladd, der aus der Perspektive der Bibelforschung schreibt, und Thomas F. Torrance, der mit seinen Beiträgen die theologische Sicht vertritt. Natürlich haben diese beiden Glaubensgelehrten von vielen anderen gelernt und beziehen sich in ihrem Denken auf sie. Sie haben das umfangreiche biblische und theologische Forschungsmaterial gesichtet.
ထိုသို့ပြုရာတွင်သူတို့သည်အထက်တွင်ဖော်ပြပြီးသောအခြေခံ၊ သမ္မာကျမ်းစာနှင့်ဘာသာရေးဝတ္ထုများနှင့်ကိုက်ညီပြီးဘုရားသခင့်နိုင်ငံတော်နှင့် ပတ်သက်၍ အခိုင်မာဆုံး၊ နားလည်လွယ်။ ပြည့်စုံသောအငြင်းပွားမှုများကိုထင်ဟပ်စေသောထိုကျမ်းချက်များအပေါ်အလေးပေးထားသည်။ ကျွန်ုပ်၏အစိတ်အပိုင်းတစ်ခုအနေဖြင့်သူတို့၏ရလာဒ်များ၏အရေးအကြီးဆုံးကဏ္aspectsများကိုကျွန်ုပ်တင်ပြပါမည်။
Ladd und Torrance haben beide nachdrücklich deutlich gemacht, dass die biblische Offenbarung das Reich Gottes unmissverständlich mit der Person und dem Heilswirken Jesu Christi identifiziert. Dieser selbst verkörpert es und führt es herbei. Warum? Weil er der König aller Schöpfung ist. In seinem geistlichen Wirken als Mittler zwischen Gott und der Schöpfung verbindet sich sein Königtum mit priesterlichen und prophetischen Elementen. Das Reich Gottes ist mit und durch Jesus Christus wahrhaftig existent; denn er herrscht, wo immer er ist. Das Reich Gottes ist sein Reich. Jesus lässt uns wissen: «Und ich will euch das Reich zueignen, wie mir’ s mein Vater zugeeignet hat, dass ihr essen und trinken sollt an meinem Tisch in meinem Reich und sitzen auf Thronen und richten die zwölf Stämme Israels» (Lukas 22,29-30) ။
Zu anderer Zeit erklärt Jesus, das Reich Gottes gehöre ihm. Er spricht: «Mein Reich ist nicht von dieser Welt» (Johannes 18,36). Somit ist das Reich Gottes nicht losgelöst davon zu verstehen, wer Jesus ist und worum es in seinem ganzen Heilswirken geht. Jede Auslegung der Heiligen Schrift bzw. jede theologische Zusammenschau des exegetischen Materials, welches das Reich Gottes nicht auf der Grundlage der Person und des Wirkens Jesu Christi interpretiert, rückt damit vom Zentrum der christlichen Lehre ab. Sie wird unweigerlich zu anderen Schlussfolgerungen gelangen als eine, die von diesem Lebenszentrum christlichen Glaubens aus operiert.
Wie können wir nun ausgehend von jenem Lebenszentrum begreifen lernen, was es mit dem Reich Gottes auf sich hat? Zunächst sollten wir festhalten, dass Jesus selbst es ist, der das Kommen von Gottes Reich verkündet und dieses Faktum zu einem allumfassenden Thema seiner Lehre macht (Markus 1,15). Mit Jesus setzt die wahre Existenz des Reiches ein; er überbringt nicht nur die diesbezügliche Botschaft. Das Reich Gottes ist erlebbare Realität, wo immer Jesus ist; denn er ist der König. Das Reich Gottes ist in der lebendigen Präsenz und im Handeln des Königs Jesus wahrhaftig existent.
သခင်ယေရှုမိန့်တော်မူသမျှနှင့်၎င်းပြုသမျှသည်ထိုသခင်၏နိုင်ငံတော်သဏ္ဌာန်ကိုဖော်ပြသည်။ သူကကျွန်တော်တို့ကိုပေးချင်သောနိုင်ငံသည်၎င်း၏ကိုယ်ပိုင်လက္ခဏာနှင့်အညီသူ့ကိုယ်ပိုင်နှင့်ဆင်တူသည်။ သူကကျွန်တော်တို့ကိုသူ့ကိုယ်ပိုင်စရိုက်နဲ့ရည်ရွယ်ချက်ကိုပြည့်စုံစေတဲ့နိုင်ငံတော်တစ်ခုဆီကိုနိုင်ငံတော်တစ်ခုဆီသယ်ဆောင်သွားတယ်။ ထို့ကြောင့်ဘုရားသခင့်နိုင်ငံတော်နှင့် ပတ်သက်၍ ကျွန်ုပ်တို့၏အတွေးအခေါ်များသည်သခင်ယေရှုသည်မည်သူမည်ဝါဖြစ်သည်။ သင်က၎င်း၏ရှုထောင့်အားလုံး၌ထင်ဟပ်ရန်ရှိသည်။ ၎င်းကိုသယ်ဆောင်သင့်သည်။ သို့မှသာကျွန်ုပ်တို့သည်သူသည်ဤနိုင်ငံသည်သူ၏ပိုင်ဆိုင်မှုဖြစ်ကြောင်းနားလည်နိုင်ရန်အတွက်သူသည်ကျွန်ုပ်တို့အားသတိနှင့်ပြည့်စုံစွာရည်ညွှန်းပြီးသူ့ကိုသတိရစေသည်။ ၎င်းသည်သူနှင့်သက်ဆိုင်ပြီးနေရာတိုင်းတွင်သူ၏လက်ရေးစာရှိသည်။ အချို့သောအဓိပ္ပါယ်ဖွင့်ဆိုချက်များအရ၊ ဘုရားသခင့်နိုင်ငံတော်သည်ခရစ်တော်၏အုပ်ချုပ်မှုသို့မဟုတ်အုပ်ချုပ်မှုနှင့် ပတ်သက်၍ အဓိကအားဖြင့်ဖြစ်သည်၊ ကောင်းကင်ဘုံသို့မဟုတ်ပထ ၀ ီအနေအထားအရတည်ရှိသည်။ ခရစ်တော်၏အုပ်ချုပ်မှုသည်သူ၏အလိုတော်နှင့်ကံကြမ္မာအရလုပ်ဆောင်သည့်နေရာတိုင်း၌ဘုရားသခင်၏နိုင်ငံတော်တည်ရှိသည်။
အရေးကြီးဆုံးမှာသူ၏နိုင်ငံတော်သည်ရွေးနုတ်ရှင်အဖြစ်သူ၏ကံကြမ္မာနှင့်ဆက်နွယ်မှုရှိရမည်။ ထို့ကြောင့်သူ၏ကယ်တင်ခြင်းအတွက်သူသည်လူ့ဇာတိခံယူခြင်း၊ ဗီဒီယို၊ ကားစင်တင်ခြင်း၊ ရှင်ပြန်ထမြောက်ခြင်း၊ ဤသည်ကိုဆိုလိုသည်မှာသူသည်ဘုရင်အဖြစ်အုပ်စိုးခြင်းကိုဗျာဒိတ်တော်နှင့်ဖျန်ဖြေသူအဖြစ်လုပ်ဆောင်ခြင်းမှသီးခြားနားမလည်နိုင်ပါ။ မောရှေ၊ အာရုန်နှင့်ဒါဝိဒ်တို့ပါ ၀ င်သောဤဓမ္မဟောင်းသုံးမျိုးလုံးသည်သူတို့နှင့်ဆက်စပ်နေကြောင်းတွေ့မြင်ရပြီးသူ၌ထူးခြားသောနည်းဖြင့်သဘောပေါက်ခဲ့ကြသည်။
သူ၏အုပ်ချုပ်မှုနှင့်အလိုတော်သည်လက်ဝါးကပ်တိုင်တွင်အသေခံခြင်းအားဖြင့်ကျွန်ုပ်တို့အားဘုရားသခင်နှင့်ပြန်လည်သင့်မြတ်စေခြင်းအားဖြင့်၎င်းကိုသူ၏သစ္စာရှိမှု၊ အသိုင်းအဝိုင်းနှင့်ပူးပေါင်းမှုများတွင်ထည့်သွင်းရန်သူ၏ဖန်တီးမှု၊ နောက်ဆုံးတွင်ကျွန်ုပ်တို့သည်သူ၏ ဦး ထုပ်အောက်၌ထားခဲ့ပါကကျွန်ုပ်တို့သည်သူ၏အုပ်ချုပ်မှုတွင်ပါဝင်ပြီးသူ၏နိုင်ငံတော်တွင်ပါ ၀ င်မှုကိုခံစားနိုင်သည်။ ထို့အပြင်သူ၏အုပ်ချုပ်မှုသည်ဘုရားသခင်၏ချစ်ခြင်းမေတ္တာကိုကျွန်ုပ်တို့ခံယူသည်။ သူသည်ကျွန်ုပ်တို့ကိုခရစ်တော်၌ရောက်ရှိစေပြီးကျွန်ုပ်တို့အပေါ်၌သန့်ရှင်းသောဝိညာဉ်တော်၏ယုံကြည်မှုကိုရရှိစေသည်။ ဘုရားသခင့်နိုင်ငံတော်တွင်ကျွန်ုပ်တို့၏ပူးပေါင်းပါဝင်ခြင်းသည်ဘုရားသခင်ကိုချစ်ခြင်းမေတ္တာနှင့်အိမ်နီးချင်းကိုချစ်ခြင်းမေတ္တာ၌ဖော်ပြခြင်းဖြစ်သည်။ ဘုရားသခင့်နိုင်ငံတော်သည်သခင်ယေရှုခရစ်တော်အားဖြင့်ဘုရားသခင်နှင့်ပcovenantိညာဉ်ဖွဲ့ထားသောအသိုင်းအ ၀ ိုင်းတစ်ခု၊ လူတစ်စု၊ ရပ်ရွာထဲတွင်ကိုယ်ကိုပြသခြင်းဖြစ်ပြီးသခင်ဘုရား၏ ၀ ိညာဉ်တော်အားဖြင့်အချင်းချင်းပြသသည်။
Aber eine solche in der Gemeinschaft erfahrene Liebe, wie wir ihrer in Christus teilhaftig werden, entspringt einem gelebten Vertrauen (Glauben) auf den erlösenden, lebendigen Gott und seine Herrschaft, wie sie immerwährend durch Christus ausgeübt wird. Somit ist der Glaube an Jesus Christus untrennbar an eine Einbindung in sein Reich gebunden. Das liegt daran, dass Jesus nicht allein verkündete, mit seinem nahenden Kommen werde auch das Reich Gottes näher rücken, sondern zudem zu Glauben und Zuversicht aufrief. So lesen wir: «Nachdem aber Johannes gefangen gesetzt war, kam Jesus nach Galiläa und predigte das Evangelium Gottes und sprach: «Die Zeit ist erfüllt und das Reich Gottes ist herbeigekommen. Tut Busse und glaubt an das Evangelium!» (Markus 1,14-15). Der Glaube an das Reich Gottes ist untrennbar mit dem Glauben an Jesus Christus verbunden. Im Glauben auf ihn zu vertrauen heisst, auf seine Herrschaft bzw. Regentschaft, sein gemeinschaftsstiftendes Reich zu setzen.
Jesus ist der über das ganze Universum herrschende König aller Könige. Nicht ein einziger Winkel im ganzen Kosmos bleibt von seiner Erlösung schenkenden Macht ausgespart. Und so verkündet er, ihm sei alle Macht im Himmel wie auch auf Erden gegeben (Matthäus 28,18), d.h. über die ganze Schöpfung. Alles wurde durch ihn und für ihn erschaffen, wie der Apostel Paulus ausführt (Kolosser 1,16).
Lässt man Gottes Verheissungen Israel gegenüber noch einmal aufklingen, so ist Jesus Christus der «König aller Könige und Herr aller Herren» (Psalm 136,1-3; 1.Timotheus 6,15; Offb.19,16). Ihm kommt genau die Herrschaftsmacht zu, die seiner würdig ist; ist er doch der eine, durch den alles erschaffen wurde und der kraft seiner Macht und seines Leben schenkenden Willens alles erhält (Hebräer 1,2စာ-၂၀; ကောလောသဲမြို့ 1,17).
စကြဝiverseာ၏အရှင်သခင်ဖြစ်တော်မူသောသခင်ယေရှုသည်မိမိ၏မည်သူတစ် ဦး တစ်ယောက်မျှမိမိပြိုင်ဘက်မဟုတ်ကြောင်း၊ ဖန်ဆင်းခြင်းအရသော်လည်းကောင်း၊ ကျွန်ုပ်တို့၏ကယ်တင်ခြင်း၏အဖိုးမဖြတ်နိုင်သည့်လက်ဆောင်ကိုလည်းသော်လည်းကောင်းမသိကြောင်းရှင်းရှင်းလင်းလင်းသိထားသင့်သည်။ အသက်ကိုဖန်တီးရန်နှင့်အသက်ရှင်ရန်တန်ခိုးမရှိ၊ အလိုတော်မရှိသောရဲဘော်ရဲဘက်များ၊ ဟန်ဆောင်သူများနှင့်အတိုးစားသူများရှိစဉ်တွင်သခင်ယေရှုသည်မိမိ၏အုပ်ချုပ်မှုကိုဆန့်ကျင်သောရန်သူအားလုံးကိုချေမှုန်းခဲ့သည်။ သူ၏ခမည်းတော်၊ ဘုရားသခင့်သားတော်၏လူ့ခန္ဓာကိုယ်၏ဖျန်ဖြေဖျန်ဖြေသူအနေနှင့်သန့်ရှင်းသောဝိညာဉ်တော်အားဖြင့်၎င်းသည်သူဖန်တီးထားသောဖန်ဆင်းခြင်းနှင့်သတ္တဝါအားလုံးအတွက်အနန္တတန်ခိုးရှင်၏ကံကြမ္မာကိုအတားအဆီးဖြစ်စေသည်။ သူသည်သူ၏ကောင်းမွန်သောဖန်တီးမှုကိုထိခိုက်ပျက်စီးစေသောသို့မဟုတ်ဖျက်ဆီးရန်ခြိမ်းခြောက်နေသောအင်အားစုအားလုံးကိုသူဆန့်ကျင်။ သူ၏အံ့ဖွယ်ရည်မှန်းချက်များမှသွေဖည်သွားရန်အထိသူသည်ဤဖန်ဆင်းခြင်းကိုချစ်ကြောင်းပြသခဲ့သည်။ သူကသူတို့ကိုဖျက်ဆီးချင်တဲ့သူတွေကိုမတိုက်ခိုက်ဘူးဆိုရင်သူဟာသူမကိုချစ်ခြင်းမေတ္တာနဲ့စည်းလုံးစေမှာမဟုတ်ဘူး။ ဤခမည်းတော်ယေရှုသည်ကောင်းကင်ခမည်းတော်နှင့်သန့်ရှင်းသောဝိညာဉ်တော်နှင့်အတူ၊ ဘုရားသခင်သည်သူတစ်ပါးနှင့်တစ် ဦး နှင့်တစ် ဦး၊ တစ် ဦး နှင့်တစ် ဦး၊ ဖန်ဆင်းခြင်းနှင့်အတူချစ်ခြင်းမေတ္တာနှင့်အသိုင်းအဝိုင်းအပေါ်အခြေပြုသည့်အသက်တာကိုပျက်စီးခြင်း၊ သူ၏မူလအဆုံးစွန်သောကံကြမ္မာကိုပြည့်စုံစေရန်သူ၏အုပ်ချုပ်မှုနှင့်တရားဥပဒေကိုဆန့်ကျင်သောအင်အားစုအားလုံးသည်နောင်တရ။ လက်အောက်ခံရမည်။ ဘုရားသခင့်နိုင်ငံတော်တွင်မကောင်းမှုမရှိပါ။
Jesus sieht also sich selbst, wie er auch von den Zeugen des Neuen Testaments dargestellt wird, als Erlösung bringender Sieger, der sein Volk von allem Übel und allen Feinden frei macht. Er befreit die Gefangenen (Lukas 4,18; 2. ကောရိန္သု 2,14). Er überführt uns aus dem Reich der Finsternis in sein Reich des Lichts (Kolosser 1,13). Er «[hat] sich selbst für unsere Sünden dahingegeben [...], dass er uns errette von dieser gegenwärtigen, bösen Welt nach dem Willen Gottes, unseres Vaters» (Galater 1,4). Genau in diesem Sinne ist zu verstehen, dass Jesus «[...] die Welt überwunden [hat]» (Johannes 16,33). Und damit macht er «alles neu!» (Offenbarung 21,5; မဿဲ ၂9,28). Der kosmische Geltungsbereich seiner Herrschaft und die Unterjochung alles Bösen unter seine Herrschaft legen über unsere Vorstellungskraft hinausgehend Zeugnis vom Wunder seiner von Gnade getragenen Königsherrschaft ab.
ဂယ်ရီ Deddo ဖြင့်ပြုလုပ်နိုင်ပါတယ်